AMISOM oo ciidamada dowladda Soomaaliya ku wareejineysa kuliyadii Jaale Siyaad – Somali Top News
AMISOM oo ciidamada dowladda Soomaaliya ku wareejineysa kuliyadii Jaale Siyaad
Hadal-qoraal oo ka soo baxay Taliska Hawlgalka AMISOM ayaa lagu sheegay inay dabayaaqadda bishan Feberaayo in Ciiddanka DFS ku wareejin doonaan Kulliyadii hore ee Jaalle Siyaad ee magaalladda Muqdisho.
Xaruntii hore ee Kulliyadda Jaalle Siyaad waxaa horey ugu sugnaa Ciiddanka Burundi ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM, kuwaasi oo halkaasi degganaa taan iyo sannadkii 2011-kii.
Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika u qaabilsan Arrimaha Somalia, Ambassador Francisco Madeira ayaa ku dhawaaqay Go’aankaasi, kadib, markii ay isaga iyo Wasiiru-dowlaha Gaashaandhigga ee Xukuumadda Federalka Somalia, Maxamed Cali Xaggaa kormeer hubin ah ku tegaeen Xaruntii hore ee Kulliyadda Jaalle Siyaad oo ku taalla Degmadda Hodan ee magaalladdan Muqdisho.
Ambassador Francisco Madeira waxa kale oo uu sheegay inay dayactireen Kulliyadda Jaalle Siyaad, isla markaana ay Ciiddanka Somalia ku wareejin doonaan qalab ay Ciiddanka Burundi halkaasi ugu tegi doonaan, lana dayactiray Ceel-biyoodka ku yaalla Kulliyaddaasi.
← Somaliland oo Bayaan ka soo saartay wadahadalada Dowladda Federalka kadib kulankii Abyi Axmad
Hub iyo Rasaas loo waday Al shabaab oo lagu qabtay magaalada Dhuusomareeb+Sawirro →
Dowladda Denmark oo aqoonsatay Baasaboorka Soomaaliya
Madaxweynaha Itoobiya oo kulan casho ah u sameeyay madaxda ka qeyb galeysa shir madaxeedka midowga Africa
Rag loo heysto weerarkii DusitD2 oo maxkamad la soo taagay